माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले नस्वीकार्दा नयाँ शक्तिका उम्मेदवारलाई समस्या « Pahilo News
माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले नस्वीकार्दा नयाँ शक्तिका उम्मेदवारलाई समस्या
प्रकाशित मिति : 13 October, 2017 9:41 am
२७ असोज । माओवादी केन्द्रका तलका कार्यकर्ताहरुले नयाँ शक्ति, नेपालका नेताका उम्मेदवारीलाई स्वीकार्न नचाहँदा वाम तालमेलमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । नयाँ शक्तिले आफ्नो प्रभाव रहेको भन्दै आएको गोरखालगायत जिल्लाहरुमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था आएको छ ।
एमाओवादीमै छँदा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच उत्पन्न प्रतिष्ठाको लडाइँ वाम गठबन्धन भएयता पुनः बल्झिएको छ । दुवै नेताले गोरखा–२ नछाड्ने अडान लिएपछि समस्या देखिएको हो । ती दुवै दलले गोरखा–२ बाट डा. भट्टराई र श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ ।
२०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा गोरखामा डा. भट्टराईले रोजेको क्षेत्रमा श्रेष्ठ उठ्न चाहेपछि दुवै नेताबीच विवाद देखिएको थियो । तत्कालीन समयमा एमाओवादीमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि वरीयतामा रहेका डा. भट्टराईले गोरखा नछाड्ने भएपछि श्रेष्ठ मकवानपुर–४ बाट चुनाव लड्न बाध्य भएका थिए । उनी सो क्षेत्रमा एमालेका सुवास ठकुरीद्वारा पराजित भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले गोरखा–२ नछाड्ने अडान लिँदै आएको छ । सो क्षेत्र निर्वाचन जित्नका लागि सहज क्षेत्र ठानिन्छ । डा. भट्टराईले पनि सोही क्षेत्रमा दाबी गर्दै आएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रले भने गोरखा–१ मा डा. भट्टराईलाई छाड्न सक्ने संकेत गर्दै सो क्षेत्रमा कमजोर उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरेको छ ।
गोरखा–२ मा विवाद देखिएपछि डा. भट्टराईले गठबन्धनका शीष नेताहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेका छन् । डा. भट्टराईले गोरखा–२ आफूलाई छाड्नुपर्ने र नयाँ शक्तिलाई सम्मानजनक स्थान दिनुपर्ने कुरा उठाएका छन् ।
तर, माओवादी केन्द्रले भने नयाँ शक्तिलाई गोरखा–२ मा नभई रसुवा दिन सकिने तर्क गर्दै आएको बताइन्छ । रसुवाको एउटा गाउँपालिकामा नयाँ शक्तिले जितेको हुँदा उक्त जिल्ला छाड्न सकिने बताइँदै आएको छ । नयाँ शक्तिले पनि रसुवा माग गरेको छ । रसुवामा यसअघि एमालेले चुनाव जितेको थियो । नयाँ शक्तिले कुनै आधार नै नभएको खोटाङ, मकवानपुर, उदयपुर, झापाजस्ता जिल्लाहरुमा पनि सिटको दाबी गर्दै आएको छ ।